Izixhobo ze-Edmondo B
I-Appartamento Edmondo B yindlwana yothando neyamkelekileyo engqongwe buhlaza. Ibonisa ichibi lokuqubha ekwabelwana ngalo kunye ne-terrace yangasese.
I-Appartamento Edmondo B yindlwana yothando neyamkelekileyo engqongwe buhlaza. Ilala abantu ababini. Ukusuka kwi-Appartamento Edmondo B uyakonwabela umbono omangalisayo weenduli zaseChianti kunye neendawo ezisemaphandleni ezikungqongileyo. I-Appartamento Edmondo B yi-55 square metres (590 square feet). Ibonisa ichibi lokuqubha ekwabelwana ngalo kunye ne-terrace yangasese.
Uyakuba malunga neekhilomitha ezili-9 (iikhilomitha ezi-5.6) ukusuka eSan Casciano eVal di Pesa, i-1 km (malunga neeyadi ezili-1100) ukusuka kwiivenkile zokutyela nakwivenkile ethengisa ukutya. Uya kufumana indawo yokumisa ibhasi ye-SITA i-Firenze-i-San Casciano Val di Pesa kumgca weemitha ezingama-300 (iinyawo ezingama-990). Uya kufikelela kwi-Appartamento Edmondo B ukusuka kwindawo yokupaka ngaphandle kokunyuka naziphi na izinyuko.
Ukuze uhlale e-Appartamento Edmondo B uya kufuna imoto. Uya kukwazi ukuyimisa kwindawo.
I-Appartamento Edmondo B yenye yezindlu zeeholide ezifumaneka kwindawo encinci. Nceda ufumane inkcazo jikelele yekhompleksi engezantsi, kwaye nceda uskrolele ezantsi malunga nenkcazo ye-Appartamento Edmondo B.
Ikhompleksi inamagumbi amathathu ahlukeneyo, ekuqaleni eyayisisitali sasefama, ishedi kunye negumbi lokulala lefama endala eyakhiwe ngohlobo lweempawu zezindlu zasemaphandleni zaseTuscan.
I-Appartamento Edmondo A inendawo yokutyela enkulu edlula iindwendwe ze-Appartamento Edmondo B ekufuphi. I-Appartamento Edmondo C igqagqene kancinane kwi-Appartamento Edmondo A kunye ne-Appartamento Edmondo B kwaye yabelana nabahlali bamakhaya akufutshane indawo yangaphandle esetyenziswa njengegadi encinci. .
Iindwendwe zala magumbi mathathu ziya kwabelana ngephuli engqukuva kunye nezinye iindwendwe zekhompleksi. Ngaphakathi ichibi kukho ingca.
Isakhiwo, kunye neqela lezinye izindlu ezikufutshane, yinxalenye yendawo yokuhlala encinci engqongwe yindalo kunye nohlaza lwamaphandle aseTuscan.
Kude kufuphi ne-complex kukho intsimi emalunga neehektare ezili-12 elinywe iminquma nemidiliya. Kwezi zidiliya kunye imithi yomnquma abanini besakhiwo bavelisa umgangatho olungileyo we-olive olive extra virgin kunye neendidi ezahlukeneyo zewayini ezibomvu nezimhlophe kunye nebranti.
Idama lokuqubha linobubanzi obuziimitha ezisi-8 (iinyawo ezingama-26) kwaye linzulu ukusuka kwi-1.20 yeemitha (iinyawo ezine) ukuya kwi-1.4 yeemitha (iinyawo eziyi-4.6). Indawo yokuqubha inezitulo kunye neendawo zokuhlala elangeni. Ukusuka kwidama lokuqubha uya kunandipha umbono omangalisayo weenduli zaseChianti kunye namaphandle akufutshane. Uya kubelana ngedama kunye nezinye iindwendwe ezihlala kwi-complex. Ivulwa phakathi kuMeyi ukuya phakathi kuOktobha.
Igumbi lokuhlala ligalelwe ngamaplanga. Isilingi ithambekile kwaye ineempawu zomthi eziveziweyo kunye neethayile zeterraccotta. Iifenitshala zilula kwaye zikhululekile. Impahla ibandakanya isofa. Kwigumbi lokuhlala uya kufumana indawo yokupheka. Ikhitshi lixhotyiswe ngesitofu segesi esitshisa izibane, i-oveni yombane, ifriji enefriji kunye nomenzi wekofu wohlobo lwaseTaliyane. Itafile yokutyela inokuthatha iindwendwe ezine. Igumbi linefestile enkulu yepanoramic kunye nombono wendawo yasemaphandleni.
Uya kukwazi ukungena kwigumbi lokulala ukusuka kwigumbi lokuhlala kunye nakwi-corridor. Igumbi lokulala linebhedi yomtshato (i-160 cm / 62 intshi, ibanzi kunebhedi enkulukazi). Igumbi lineefestile ezimbini ezinkulu zepanoramic ezinombono wendawo yasemaphandleni.
Igumbi lokuhlambela linodonga oluqatywe ngamatye kwaye lixhotyiswe ngesitya sokuhlamba, indlu yangasese kunye neshawari. Uya kukwazi ukungena kwigumbi lokuhlambela ukusuka kwigumbi lokuhlala.